ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် စက်ရုံမြေနေရာ ရရှိရန် ယခင်အစိုးရရော ယခုအစိုးရပါ တာဝန်ယူမှု မရှိ၊ ?? - Yangon Media Group
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် စက်ရုံမြေနေရာ ရရှိရန် ယခင်အစိုးရရော ယခုအစိုးရပါ တာဝန်ယူမှု မရှိ၊ ??
ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအတွက် စက်ရုံမြေနေရာ ရရှိရန် ယခင်အစိုးရရော ယခုအစိုးရပါ တာဝန်ယူမှုမရှိကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မြင့်က လွှတ်တော်တွင်ပြောသည်။ ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချို တင်သွင်းသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု လျင်မြန်ချောမွေ့လွယ် ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လုပ်သားအင်အားအခြေပြုသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ကျယ်ပြန့်လာစေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများပေါ်လာအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုအပေါ် ကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးရာ ယင်းသို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
”စက်ရုံမြေနေရာရရှိရေးကို ယခင်အစိုးရရော၊ ယခုအစိုးရပါ တာဝန်ယူမှုမရှိပါဘူး။ ငှားရမ်းခ တွေသိပ်မြင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ပေါက်ဈေးထက် အနည်းဆုံးနှစ်ဆ လောက်မြင့်ပါတယ်။ ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Industrial Zone အသစ်တွေကို Developer တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ အမြန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။ နံပါတ်(၂)အချက်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး (၃)မှာ လျှပ်စစ်မမှန်ခြင်းနှင့် မီးအား မပြည့်ခြင်း၊ (၄)မှာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား၊ (၅)မှာ ညင်သာပျော့ ပျောင်းခိုင်မာသည့် ဥပဒေလို ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
”နံပါတ်(၆)က လုပ်ခလစာပါ။ ယခုအခါမှာ ကျပ် ၃၆ဝဝ ကနေ ကျပ် ၄၈ဝဝ တိုးဖို့လုပ်နေတယ်။ တကယ်တိုးမယ်ဆိုရင် CMP(အထည်ချုပ်) တွေ ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ နေ့စဉ်စား ဝတ်နေရေး စရိတ်ကမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကို နှစ် ဖက်ချိန်ပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဇွတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ CMP တွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကို Shift လုပ်သွားမှာသေချာတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်”ဟု ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။ ကျန်အချက်များမှာ ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွင် Red Tape များရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေး၊ နိုင်ငံတကာရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်မှု ပြန်လည်ရရှိရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းကထပ်လောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင် မောင်ဝင်းက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုယ်စား အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ(၁၂)ရပ်ပါ နံပါတ်(၅)တွင် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံ သားများနှင့် နိုင်ငံခြားမှပြန်လည် ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ပေးရန်ပါရှိပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒများအရ ကော်မတီအသီးသီးကိုဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု ရှင်းလင်းသည်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုအပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီးက ”စုစု ပေါင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၄၇ ခုအနက် အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းပေါင်း ၁၉၁၄ဝ၉ နေ ရာကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကြိုးပမ်းရာမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဟာ ပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတံခါးဖွင့်ပြီး ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းကရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများကိုလည်း အားပေးလျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောကာ အဆိုကိုမှတ်တမ်းတင် အဆင့်ထားရန်ပြောသည်။
အဆိုရှင်ဒေါ်ချိုချိုက ”အစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိမှာလုပ် ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ပကတိ အခြေအနေမှာလိုအပ်နေတာ တွေရှိနေဆဲဖြစ်တာမို့ ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများရဲ့ ဆွေးနွေးချက် တွေ ထောက်ပြချက်တွေကို အ ရေးတယူဆောင်ရွက်ပြီး ပြင်ဆင်သင့်တာတွေကို အမြန်ဆုံးပြင် ဆင်သင့်ပါတယ်” ဟုပြောကာ အဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်စောင့် ကြည့်အဆင့်ထားရန်ပြောသည်။ အဆိုရှင်၏မှတ်တမ်းတင် စောင့်ကြည့်ပေးရန်သဘောထားကို လွှတ်တော်ကကန့်ကွက်သူမရှိ သဘောတူခဲ့သဖြင့် အဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ် ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးတို့ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုေ
ခန္တီးမြို့နယ်ရှိ ကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက်များရှိရာ နန်စီပွန်ဒေသ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် ကတ်များ အေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ရေးဆွဲတင်ပြထားသည့် တိုက်ခန်းအိမ်ရာ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ အဆိုပြုမြူ
မန္တလေးမြို့ အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ခြမ်း ဆက်သွယ်သည့် ခုံးကျော်တံတားပေါ်တွင် နှစ်တန်နှင့် အထ